ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း – ကိုမျိုး ၈၈ –ကျောင်းသားတွေ နို င် တ ယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ေ ကျာင်းသားတွေ နို င် တ ယ်
S T U D E N T S’ H E R O I C V I C T O R Y !
★ အ ကြ မ်းဖ က် ဖ မ်းဆီးခံ ရ တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကို ချ က် ချ င်းလွှ တ် !!!!!!! ★
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း – ကိုမျိုး ၈၈
မ တ် လ ၁ ၃၊ ၂ ၀ ၁ ၅